Saadaasha Hawada - Shabakad Saadaasha Hawada | Saadaasha Websaydhka (Bogga 3)
Xayeysiintu waa arrin aad muhiim u ah in lagu xisaabtamo saadaasha hawada. Qodobkaan waxaad ku ogaan doontaa wax walba si qoto dheer. Maxaad sugeysaa
Fenology waxay barataa wareegyada nolosha ee noolaha. Waa lagama maarmaan in kor loo qaado wax soo saarka lana barto noolaha. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Goobta loo yaqaan 'cryosphere' waa aagga Dhulka oo ku daboolan baraf ama baraf. Waxay fulisaa hawlo badan oo ku saabsan cimilada meeraha. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Luke Howard iyo kala soocida daruuraha
Luke Howard wuxuu ahaa farmashiiste jecel xiisaha saadaasha hawada oo ku guuleystey inuu magacaabo daruuraha. Halkan ka ogow wax walba oo isaga ku saabsan.
Noocyada daruuraha ayaa aad ugu kala duwan samadeenna. Mid waliba wuxuu matalaa xaalad cimilo. Halkan ka baro wax walba oo iyaga ku saabsan.
Precambrian Aeon waa midka tilmaamaya bilowga taariikhda meeraheenna. Waa kuwan geeddi-socodka sameynta nolosha. Ma rabtaa inaad ogaato?
Shaxda cimilada ayaa ah aalad si ballaaran looga adeegsado saadaasha hawada. Halkan waxaad ku ogaan kartaa sida loo sameeyo iyo waxa doorsoomayaasha ah ee ay leeyihiin.
Cenozoic waa muddo soo bilaabatay 66 milyan oo sano ka hor waxayna soo qaadatay isbeddelo badan. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato waqtigan?
Glaciation-ku waa xilli meeraha inta badan lagu daboolo daboollada waxayna keentaa da'da baraf. Halkan ka raadi wax walba.
Mawjadaha Guga waa ifafaale ay soo saartay ficilka culeyska qorraxda iyo dayaxa. Goorma ayey dhacayaan sideese loo sameysmaa?
Halkan waxaad ku baran kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan fulkaanaha Kilauea. Baro sida loo sameeyay, waxqabadka ay leedahay iyo waxyeelada uu geysanayo.
Baro inaad tarjunto khariidada cimilada oo aad fahamto astaamaha ku dul qoran. Ma jeceshahay inaad wax badan ka ogaato arrintan?
Soo ogow guulaha saynisyahan Alfred Wegener, oo gebi ahaanba beddelay sida aan ku aragno Dunida sanadkii 1912. Ma rabtaa inaad wax ka barato isaga?
Baro wax ku saabsan geedi socodka oo dhan ee helitaanka tamarta la cusboonaysiin karo sida biomass, noocyadeeda, daaweyntiisa ka hor iyo sidoo kale geedi socodka isbeddelka biomass
Waa maxay waqtiga juqraafiyeed iyo sidee loo cabiraa?
Baro adeegsiga waqtiga juqraafiyeed iyo fahamka isbeddelka meeraha Dunida. Qoraalkan waxaad ku baran kartaa wax walba oo ku saabsan.
Qoraalkan waxaad ku awoodi doontaa inaad ku ogaato noocyada kala duwan ee dhagaxa jira, astaamahooda iyo xaaladaha sameysmahooda. Ma rabtaa inaad wax ka barato?
Soo ogow waa maxay guuldarrooyinka isbeddelka iyo hannaankooda sameynta. Saamayn intee le’eg ayey ku leedahay muuqaalka dhulka?
Ka baro waxbadan oo ku saabsan sameynta dabaqa badda iyo waxa loo yaqaan 'guyots' ee qoraalkan. Sidee loo sameeyay samofal-badeedyadan?
Geedka Badweynta: asalka, astaamaha iyo firfircoonida
Mashruucan waxaad ku baran doontaa asalka, astaamaha ugu muhiimsan iyo firfircoonida xeebta badweynta. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
Waa maxay, sida ay u samaysantay iyo astaamaha barafka
Glacier waa qaab dhismeed aad muhiim ugu ah noolaha. Soo ogow sida loo sameeyay iyo astaamaheeda oo dhan qoraalkan.
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa samaynta barafka, joomatari ee barafka iyo noocyada barafka jira. Ma rabtaa inaad wax walba ka barato?
Barar, qaybo ka mid ah hirarka, iyo hirarka waaweyn
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha bararka, qaybaha mawjada iyo sida hirarka waaweyn u samaysan yihiin. Ma rabtaa inaad wax dheeraad ah barato?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha aaladda mitirka mitirka iyo noocyada iyo korontada ay leedahay. Ma rabtaa inaad ogaato muhiimada aaladda loo yaqaan 'hygrometers'?
Equinox-ka vernal waa xilli qaas ah oo sanadka ah, marka habeen iyo maalin ay ficil ahaan isku saacado yihiin. Ogow markay dhacdo!
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa radar roobab, astaamahiisa iyo sida uu u shaqeeyo. Ma rabtaa inaad ogaato sida khubarada saadaasha hawadu u saadaalinayaan roobka?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa arrin la yaab leh oo saadaasha hawada ah oo loo yaqaan halo qorraxda. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u sameysantahay iyo meesha aad ka arki karto?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha iyo waxtarka roobka ama khariidadaha roobab ee khubarada saadaasha hawada iyo saadaasha hawada. Ma rabtaa inaad barato tarjumaadooda?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa neecawda badeeddu waa maxay, sida iyo goorta ay samaysan tahay iyo astaamaha ugu waaweyn. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa saameynta kuleylka adduunka ee baraf-biyoodka Ecuador. Maxay khubaradu ku sameyn karaan xaaladdan?
Markuu meeraha kululaado, dhirtu waxay biloowdaa xilli-koraynteeda goor hore, iyagoo la kulmaya dhaxan guga.
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa waxa mowjaduhu yihiin, arrimaha ay ku tiirsan yihiin qaab-dhismeedkoodu iyo noocyada kala duwan. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato?
Haddii aad ka mid tahay kuwa ku raaxeysta daawashada hillaaca, ka faa'iideyso wax kasta oo aad awoodid, maxaa yeelay dhammaadka qarniga waxaa lagu dhimi karaa illaa 15%.
Nidaamyada barafka ka hortagga ma saameyn karaan abaaraha ka jira dhulka qoyan?
Mawduucani wuxuu ka hadlayaa nidaamyada ka hortagga roob-dhagaxyada iyo saameyntooda suurtagalka ah ee roobabka Hagayaasha Gallocanta. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Balliyo macmal ah oo loogu talagalay jilitaanka saamaynta isbeddelka cimilada
Mashruucan, waxaan kahadleynaa tijaabada barkadaha macmalka ah ee Spain iyo Boortaqiiska si loo ogaado saameynta isbedelka cimilada ee nidaamka deegaanka kaladuwan.
Lakabka ozone-ku wuxuu ku guuldaraystaa inuu ku xoojiyo meelaha ugu badan ee meeraha
Difaaca difaaca nolosha ee Dunida, lakabka ozone, ayaa sii wiiqmaya, gaar ahaan meelaha ugu dadka badan, halkaas oo wasakhdu tahay dhibaato aad u daran. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Barafka Arctic ayaa dhalaala xilliga jiilaalka sidoo kale
Xilliga jiilaalka Arctic ayaa sidoo kale lumisa baraf. Heerkulku aad ayuu u sarreeyaa oo lama joogi karo, sidaa darteedna cilmi-baarayaashu waxay filayaan inuu gebi ahaanba baaba'o xagaa kasta oo ka bilaabmaya 2030.
Hawo nadiif ah ayaa ka sii dari karta cawaaqib xumada cimilada adduunka
Daraasad cusub ayaa lagu sheegay in qiiqa aerosolku ilaaliyo qayb ka mid ah shucaaca qoraxda. Haddii kuwan laga saari lahaa, heerkulka celceliska adduunka ayaa ka kici kara 1,1 darajo in ka badan.
Barafka Gray wuxuu lumiyaa baraf kale
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa xaaladda Glacier Grey iyo luminta baraf baraf ah. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay xaaladdu tahay?
Daruur sabaynaysa qurxinta guriga
Miyaad jeceshahay in daruur sabeysa ay kuugu jirto gurigaaga? Hadda waad ka dhigi kartaa inay ku dhacdo mahadnaqa naqshadeeye Richard Clarkson. Kaalay oo fiiri naqshadeeda.
Naasleyda iyo shimbiraha ayaa si fiican ula qabsan doona isbedelka cimilada
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa xaaladaha deegaanka ee naasleyda iyo shimbiraha ay sifiican ula qabsadaan isbedelka cimilada. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha ugu waaweyn iyo samaysanta daruuraha cirrus. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato iyaga?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa daraasad lagu sameeyay saamaynta isbeddelka cimilada ee abaaraha wabiga Júcar. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Mawjadaha qabow ee Japan: waddanku wuxuu diiwaangeliyaa heer kulka ugu hooseeya muddo 48 sano ah
Qulqulka hawada Siberia ee qabow ee ku soo qulqulaya Japan ayaa diiwangalineysa heerkulka ugu hooseeya muddo 48 sano ah waxa ugu xunna waa inaysan wali dhamaan
Lakabka ozone wuxuu muujinayaa soo kabasho soddon sano kadib
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa calaamadaha soo kabashada lakabka ozone ee laga helay cabbiraadaha dayax gacmeedka.
Sawiradii ugu horeeyey ee wasaqowga hawada ee HD
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa dayax gacmeedka Sentinel 5-P iyo suurtagalnimada qaadashada sawirrada HD ee wasakheynta hawada. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa ficilada aad qaadi karto si aad uga caawiso la dagaallanka isbeddelka cimilada. Ma rabtaa inaad ogaato waxaad sameyn karto?
Haddii aad jeceshahay sharoobada maple, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa sababta ay uga baaba'ayso suuqa tobanaan sano oo soo socda. Ha moogaan
Saynisyahannadu waxay daraaseeyaan saameynta isbeddelka cimilada ee Waddada Qalalan
Mawduucani wuxuu ka hadlayaa abaarta Waddada Qallalan ee Bartamaha Ameerika ay la ildaran tahay Isbeddelka Cimilada.
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa khaladaadkii la sameeyay markii wax laga baranayay isbedelka cimilada. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
Qeybtaan waxaad ku baran doontaa noocyada qaraxyada fulkaanaha, sida ay u shaqeeyaan iyo qeybaha fulkaanaha. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
2018 wuxuu ku bilaabmayaa roobab ka sarreeya qiimaha caadiga ah
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa roobabkii da'ay bilowgii sanadka 2018 iyo qiimayaashiisa oo ka sarreeya sida caadiga ah.
Sannadka 2017 wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu kululaa uguna qallalka badnaa taariikhda
Qoraalkani wuxuu soo koobayaa heerkulka iyo roobka ka dhigaya 2017 mid ka mid ah kuwa ugu diirran uguna qalalan taariikhda.
Waa maxay farqiga u dhexeeya saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada?
Waxaan kuu sheegi doonaa waxa ku kala duwan saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada, labo cilmiya oo aad isugu eg laakiin leh ujeedo kale.
Heerkulka badda ee ku soo kordhaya aagga Great Barrier Reef ayaa hoos u dhigaya tirada qoolleyda cagaaran ee Australia. Soo ogow sababta.
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa dhacdooyinka xiddigiska ee kala duwan ee dhici doona 2018. Ma doonaysaa inaad ogaato waxay yihiin?
Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah duufaanta awgeed
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa duufaanka ka dhacaya Maraykanka hadda. Ma rabtaa inaad ogaato wax kasta oo dhaca?
Maalgelinta kaabayaasha cagaaran ayaa fure u ah in si wanaagsan loola qabsado isbedelka cimilada
Koox saynisyahano Isbaanish ah ayaa maalgashanaya kaabayaasha cagaaran si ay jardiinooyinka qaranku si fiican ula jaanqaadaan isbedelka cimilada.
Barafka dhalaalaya ayaa qayb ahaan ka caawin kara isbedelka cimilada
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa daraasad sheeganeysa in barafka barafku gacan ka geysto kordhinta nuugista CO2 ee kaymaha ceelasha. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Isu dheellitirka burburka uu sababay duufaanta Bruno
Qoraalkani wuxuu soo koobayaa waxyeelada ay geysatay duufaanta Bruno ee Spain. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay ahaayeen?
Antarctic krill, xulafada yar ee ka soo horjeedda isbedelka cimilada
Daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday in Antarctic krill, oo ah qolof dhererkeedu yahay kaliya dhowr sentimitir, ay keydiso tiro badan oo CO2 ah. Soo gal oo soo ogow.
Mediterranean Cystoreira waa algae inta badan ay saameeyeen isbeddelka cimilada
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa badda Mediterranean Cystoseira iyo u nuglaanta saameynta isbedelka cimilada. Sidee buu kuu saameynayaa?
Isbedelka cimiladu wuxuu kordhiyaa gudbinta cudurka
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa saameynta isbeddelka cimilada ee kordhinta faafidda cudurrada faafa. Waa kuwee?
Antarctica si loo ogaado sida isbeddelka cimilada uu u saameeyo qalinleyda
Aqoonyahan ku takhasusay cilmiga noolaha Josabel Benlliure ayaa ku qarash gareeya ciida masiixiga Antarctica si uu u ogaado sida isbedelka cimilada uu u saameeyo qalinleyda
Duufaanta Bruno waxay timid Spain, jiilaalka koowaad
Bruno waa duufaantii ugu horreysay ee na soo gaarta xilliga jiilaalka iyo tan labaad ee la magacaabay. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay noo saameyn doonto?
Daraasad ayaa xaqiijineysa xagaaga ugu qalalan qarniyadii lasoo dhaafay
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa daraasad xaqiijineysa in xagaaga ugu qalalan la diiwaan geliyey qarniyadii dhowaa. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato daraasaddan?
Nofeembar 2017 waxay ahayd tii shanaad ee ugu kululayd taariikhda la diiwaangeliyo
Bishii Nofeembar 2017 waxay ahayd tii shanaad ee ugu kululayd tan iyo markii ay diiwaanno jiraan. Heerkulka celceliska adduunka ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya.
Maqaalkani wuxuu soo koobayaa sifooyinka ay yeelan doonaan Kirismaska ​​iyo jiilaalka 2018. Ma rabtaa inaad ogaato siday noqon doonto?
Halkan waxaan uga hadlaynaa soo koobitaan sannadka saadaasha hawada ee 2017. Dhammaan dhacdooyinka dhacay iyo kuwa ugu xusidda badan. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
Labada xawaare ee isbeddelka cimilada
Isbedelka Cimilada wuxuu leeyahay laba xawaare: horumarkiisa dabiiciga ah iyo kan wadahadallada lagu joojinayo. Maxaa la qabanayaa?
Yey ku dhici doontaa dhibaatada ugu xun cawaaqibta isbedelka cimilada?
Isbedelka cimilada si isku mid ah uma saameynayo dadka. Waxaa jira dalal aad u nugul oo sidaas darteed, cawaaqib xumadooda si ka sii daran u la kulmi doonta. Wadamadee yihiin
Nofeembar 2017: waa bishii abaarta ee Spain
Waxaan kuu soo gudbineynaa soo koobista billaha ah ee AEMET, oo ay ka caasinayso in bisha Nofeembar 2017 ay ahayd mid aad u qalalan oo caadi ah heerkulka.
Maxay duufaannada hadda magacyo u leeyihiin?
Maxay duufaannada hadda magacyo u leeyihiin? Laga bilaabo Diseembar 1, 2017, duufaannadan waxay heli doonaan magac habboon. Kaalay oo waanu kuu sheegaynaa sababta.
Heerkulka adduunka ayaa sare u kici doona inta u dhexeysa 3 iyo 4 darajo sannadka 2050
Koox ayaa baartay soo jeedinta ay sameeyeen wadammada ku jira heshiiska Paris si loo yareeyo heerkulka waana kuwan natiijooyinka.
Faro-gelinta boorka Saharan wuxuu saameeyaa Sierra Nevada
Isbedelka cimilada wuxuu kordhiyaa soo gelitaanka boodhka Saxaraha ee Sierra Nevada. Sidee boodhkani u saameeyaa nidaamka deegaanka?
Sharciga Isbedelka Cimilada ee mustaqbalka wuxuu ballan qaadayaa kala-guur caadil ah
Sharciga mustaqbalka ee uu ku soo saari doono isbedelka cimilada ayaa ka fiirsan doona kala guurka cadaaladda ee qeybaha oo dhan. Muxuu yahay ku-meel-gaadhka ah "ku-meel-gaadhka ah" ee ku saleysan?
Ciidda oo ah hub wax ku ool ah oo ka dhan ah isbeddelka cimilada
Carradu waxay awood u leedahay inay ceshato kaarboonka ku jira jawiga sidaasna ay gacan uga geysato la dagaallanka isbeddelka cimilada Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Maxay yihiin meelaha ugu qabow Spain?
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu qabow Spain. Soo ogow waxa heerkulka ugu hooseeya laga diiwaan geliyey dalka.
Qaybaha dabiiciga ah ee cimilada ayaa yareeya xaddiga kuleylka adduunka
Sida laga soo xigtay daraasad cusub, walxaha dabiiciga ah ee dabiiciga ahi waxay awood u leeyihiin inay qaboojiyaan meeraha sanadaha diiran. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Isbadelka cimilada fursad ma u tahay manaafacaad dhaqaale?
Dhaqaaleyahan Dimitri Zenghelis, isbedelka cimilada ayaa fursad u ah kobaca dhaqaalaha. Runtii ma sidaas baa?
Jabka glacier ee 'Grey glacier' oo calaamad u ah isbeddelka cimilada
Heerkulka adduunka oo sii kordhaya sababo la xiriira isbadelka cimilada ayaa sababay in Grey Glacier uu jabo. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Hilibleyda dhexdhexaadka ah ayaa si aad ah ugu sii dhowaan kara isbeddelka cimilada
Heerkulka kululaanaya iyo khasaaraha sii kordhaya ee deegaanka, hilibka dugaagga dhexdhexaadka ah ayaa si sii kordheysa ugu nugul isbedelka cimilada.
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' oo ah hab maalgelin ka dhan ah isbeddelka cimilada
Si loo maalgeliyo mashaariicda lagu joojinayo isbedelka cimilada waxaa jira nooc gaar ah oo lacag ah oo loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeeyaan?
Bini'aadamnimada waxaa looga tagi karaa iyada oo aan la helin khasnadaha adduunka ugu waaweyn isbadalka cimilada darteed
Maaddaama celceliska heerkulka adduunku kor u kacayo, khasnadaha adduunka ugu muhiimsan ayaa halis geli kara. Gali oo soo hel sababta.
Maxay degdeg ugu tahay wax ka qabashada saameynta caafimaad ee isbeddelka cimilada?
Maaddaama celceliska heerkulka adduunku kor u kacayo, isbeddelka cimilada ayaa leh saameyn caafimaad oo u baahan in wax laga qabto. Waan sharaxeynaa sababta.
Spain wali ma wajaho isbedelka cimilada
Spain, oo ah wadan aad ugu nugul isbedelka cimilada, ayaa sii socota iyada oo aan la qaadin talaabooyin wax looga qabanayo. Tani waa sida magaalooyin dhowr ah u cambaareeyeen xaaladda. Soo Galaya
Bamboo lemur-ka ayaa u macaluusha isbedelka cimilada
Bamboo lemur waa nooc caan ah oo ka soo jeeda Madagascar oo dhibaato badani ka haysato la qabsiga isbedelka cimilada. Gali oo soo hel sababta.
Kulan ay isugu yimaadeen 200 oo beari ayaa ka digaya isbedelka cimilada
Seynisyahanno ayaa heegan galiyay koox ka kooban 200 oo orso oo cunaya nibir bada xeebta jasiiradda Wrangel (Siberia). Gali oo soo hel sababta.
Daraasad cusub ayaa lagu sheegay in kuleylka adduunka uusan istaagin muddadii u dhaxeysay 1998-2012. Taasna kaliya maahan, laakiin Arctic ayaa hadda aad uga nugul.
Shirkii Cimilada Bonn 2017 ayaa dhammaaday (COP23)
COP23 ee Bonn wuu dhammaaday iyadoo tan, dokumenti la diyaariyey oo ay ku jiraan xeerarka la raacayo. Muxuu ka kooban yahay dukumintiga?
Dhinaca jacaylka ugu badan ee saadaasha hawada
Waxaan kuu sheegeynaa sheekada xiisaha leh ee Vyacheslav Korotki, oo ah 63 jir ku takhasustay saadaasha hawada kuna nool kana shaqeysa dhulka Arctic. Soo Galaya
Godka ku jira lakabka ozone-ka ayaa la joojiyay markii ugu horreysay adduunka. Sidee bay u egtahay aragtida ozone ee dhulkeena?
Nalalka Woqooyi waa ifafaalooyin hubaal in qof kastaa maqlay. Laakiin miyaad ogtahay sida ay u samaysan yihiin iyo sababta? Halkan ka baro.
Supertornado iyo Supercomputer: Jilitaan ayaa la gaadhay
Dhacdadii loo ekaysiiyay waxay gaadhay dabaylo isdaba joog ah oo ilaa 320 mayl saacadiiba, waxay dileen 9 qof waxayna dhaawaceen ku dhowaad 200.
Maxay bada u badaleysaa midabka?
Weligaa ma isweydiisay sababta bada u bedesho midabka? Ha ka waaban inaad gasho si aad u hesho jawaabta su'aashaada. ;)
Oktoobar waxay ahayd tii labaad ee ugu kululayd tan iyo 1965
Heerkulka celcelis ahaan 18,5 °, oo leh cillado ilaa 4,1 ° ka sarreeya inta caadiga ah, bisha Oktoobar waxay ahayd tii labaad ee ugu kululaa tan iyo 1965.
VIDEO: Google Earth wuxuu muujinayaa xogta wasaqowga hawada
Weligaa ma isweydiisay inta magaalooyinku wasakheeyaan? Hadda waxaad ka heli kartaa mahadsanid Google Earth. Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa sida.
Isbedelka Cimilada ayaa ah mid uu sameeyay dad
Halka Donald Trump uu beeninayo isbeddelka cimilada, haddana warbixin cusub ayaa lagu soo gabagabeeyay in bina-aadamku ku keenay 95%. Soo Galaya
Shirka Bonn Climate Summit (COP23) ayaa furmaya
Maanta furitaankii shirkii Bonn Cimilada (COP23) ayaa dhacay. Waxaa loogu talagalay in lagu qaabeeyo Heshiiskii Paris. Marabtaa inaad sii wadato
U fiirsashada saadaasha hawada
U kuurgalka saadaasha hawada ayaa lagama maarmaan u ah in la soo saaro moodooyinka saadaalinta cimilada. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo arko saadaasha hawada?
Fulkaanaha ugu weyn ee Iceland oo qarxaya
Dhulgariirradii ugu dambeeyay ee aagga ka dhacay waxay muujinayaan in volcano Bardarbunga, oo ugu weyn Iceland, ay dhowaan qarxi karto.
Kaarboon laba ogsaydhku waxay jebisaa taariikh cusub oo abidkeed
Sannadkii hore isku ururinta kaarboon laba ogsaydhka ayaa u sarreeyay sidii ay ahayd intii u dhexaysay 3 iyo 5 milyan oo sano ka hor. Gali oo waan kuu sheegi doonaa sababta.
Tottenham Glacier waa tan ugu weyn bariga Antarctica, dhalaalkiisuna wuu sii kordhayaa sababo la xiriira dabeylo ku soo kordhay Koonfurta Badweynta.
Midabka buluugga ah ee cirka ma aha natiijada milicsiga badda ama taa beddelkeeda. Waxaan si qoto dheer kuugu sheegeynaa sababta ay dhacdadani u dhacdo.
Ma ogtahay in kuleylka adduunka, wasakheynta iyo abaaruhu ay kordhinayaan dadka xasaasiyadda le? Gali oo soo hel sababta.
Haddii aysan qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo adag si loo joojiyo kuleylka adduunka, dhammaadka qarniga New York waxaa laga yaabaa inay la kulmaan daadad ka badan 5m.
Daraasad la sameeyay ayaa shaaca ka qaaday in hadii qiiqa kaarboon laba ogsaydhka ay sii laba jibaaraan, monsoonku uu wiiqmi doono Waqooyiga Ameerika. Waxaan kuu sheegeynaa sababta. Soo Galaya
Saddex kayn oo Isbaanish ah ayaa loo doortay daraasadda saameynta isbedelka cimilada si loola qabsado. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Daruuraha layaabka leh ee Subaxnimada Subaxnimo iyo sababaha suurtagalka ah
Waxaan ka hadleynaa daruuraha aan caadiga ahayn ee Subxaanalah, iyo waliba sameysashadooda yaabka leh iyo tan yar ee la isla oggol yahay, iyo astaamaha ay leeyihiin
Sannadkan 2017 waxaan u jiheysaneynaa mid ka mid ah sannadaha ugu kulul adduunka, iyo sida ugu macquulsan Spain, iyadoo El Niño uusan saameyn.
Shirka soo socda ee Cimilada (COP23) ayaa lagu qaban doonaa Bonn bisha soo socota ee November. Astaamahee ayuu COP23ani leeyahay?
Midowga Afrika wuxuu sii wadaa mashruucii hammiga ahaa ee lagu joojinayay horay u socodka lamadegaanka iyadoo la dul dhigayo biriiga iyadoo lagu dhisayo darbi geedo ah
Isbaanishku waa wadan u nugul isbedelka cimilada waana inuu qaadaa talaabooyin uu kula qabsado. Maxay Spain qaban kartaa?
Muxuu Spain uga yaraan roobabku?
Waa maxay sababta ay Isbaanishku had iyo jeer u leedahay anticyclone iyo cimilada wanaagsan? Sababta waxaa ugu wacan Azores Anticyclone. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
Ciidda geedaha leh waxay gacan ka geystaan ​​kuleylka adduunka
Tijaabo la bilaabay 26 sano ka hor ayaa muujineysa su'aal muhiim ah oo ku saabsan kululaynta caalamiga ah ee carrada dhirta, ma waxaad dooneysaa inaad wax badan ka ogaato?
Dabka kayntu waxay noqon doonaan kuwo qatar badan oo waara sababo la xiriira kuleylka adduunka
Markay meeraha kululaadaan, xilliga qalalan ayaa sii dheeraan doona, taasoo sii xumaynaysa dabka duurjoogta. Waxaan kuu sheegeynaa sababta iyo sida looga fogaado.
Baro sida daruuraha u samaysmaan iyo sida roobabku u dhacaan, sababaha keena iyo noocyada jira
Xiriir ma dhex mari karaa dhul gariirka iyo qarax folkaanaha? Khabiir ku xeel dheer cilmiga volcano-ka ayaa xaqiijinaya, kuna degdegay inuu diido xaqiiqadan
Wareegga dabaysha ee Argentina waxaa go'aamiya El Pampero, El Zonda iyo La Sudestada. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato dabaylahaas?
Maxaa loo yidhi kaymaha roobku waxay xukumaan cimilada adduunka?
Weligaa ma isweydiisay sababta loo yidhi kaymaha roobka ayaa hagaya cimilada adduunka? Gali oo waxaad kaheleysaa jawaabta. Adiga ayaa kaa yaabi doona. ;)
Antarctica's Pine Island glacier waxaa soo foodsaartay dhul go 'weyn
Dhalmadu way sii socotaa, markanna waxay ku samaysaa buur baraf ah oo 4 jeer ka weyn cabbirka Manhattan. Cawaaqibta mustaqbalka rajo ma leh.
Waxaa la tuhunsan yahay in 27% cufnaanta iyo tamarta koonkan ka kooban ay ka kooban tahay waxa loogu yeero madow, maxaan ka naqaan arrinta madow?
Cilmi-baare MIT ah ayaa soo saaray qaaciido xisaabeed oo muujinaysa ixtimaalka weyn ee baabi'in weyn haddii heerarka CO2 aysan hoos u dhicin
Isbedelka cimiladu wuxuu kordhin doonaa xoojinta duufaannada
Heerkulka sii kordhaya ee ay sababtay isbeddelka cimilada, saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin inay ku sii kordhin doonaan xoog aad iyo aad u badan
Cimilada sii kululaaneysa waxay sare u qaadi doontaa heer kulka Colombia 2,4 ° C
Gudaha Kolombiya, waxaa lagusoo bandhigay isgaarsiinta sadaxaad ee qaran ee isbadalka cimilada sidee kororka heerkulkaani saameyn ugu yeelan doonaa wadamada?
Midowga Yurub wuxuu falanqeynayaa baahida loo qabo in la yareeyo qiiqa qiiqa ee wajahaya isbedelka cimilada
Marka loo eego falanqaynta muuqaalka ee tallaabada EU ee tamarta iyo isbeddelka cimilada, tallaabada wax ku oolka ah ee dhanka tamarta waa lagama maarmaan.
Dayrta 2017 ayaa ka diirnaan doonta sida caadiga ah
Dayrta ayaa soo galeysa Waqooyiga Hemis maanta 22:02 pm waxayna kubilaabmi doontaa kuleyl badan iyo roob yar.
Lagu ogaaday shey cusub oo u gaar ah Nidaamka Qorraxda
Raadinta dhowaan la yaab leh oo lagu arkay meeris laba-geesood ah markii ugu horreysay. Taasi waa, laba xiddigood oo isweydaarsanaya inta udhaxeysa.
Barafka Aasiya ayaa dhalaalaya isbeddelka cimilada awgeed
65% ee baaxada buuraha dhaadheer ee Aasiya waa la waayi karaa hadii qiiqa hawada lagu sii daayo uu sii socdo.
Sharaxaad ku saabsan sameynta daruuraha is dul saaran oo ay la socdaan sawirro. Abuuritaan xiise leh oo aan caadi ahayn oo waliba waqti saadaaliya.
Cilmi-baaris ayaa soo saartay algorithm ka caawisa falanqaynta xogta cimilada si loo raadiyo calaamado cusub iyo caddayn isbeddelka cimilada.
Dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee qaaradaha waxay ka dhigan tahay in 250 milyan oo sano, dhulkeenu uusan u ekaan doonin sida uu maanta yahay.
Qulqulka diyaaraduhu waa qulqul hawo ah oo ku socota xawaare sare iyo meeraha meeraheeda Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeyso
Bangiga Adduunka wuxuu ka digay in isbeddelka cimilada uu dhalin doono 100 milyan oo masaakiin ah sannadka 2030 - miyaad dooneysaa inaad wax badan ka ogaato?
Maxay u jirtay kululaynta adduunka 56 milyan oo sano ka hor?
Qiyaastii 56 milyan oo sano ka hor, Dhulku waxaa ku dhacay kuleylka adduunka oo si lama filaan ah u dhacay, taas oo loogu yaqaan 'Paleocene-Eocene Thermal Maximum'.
Joengineering ma marin looga baxaa isbeddelka cimilada?
Ficillada ay fuliyeen sahaminta juquraafiga waxay keeneysaa su'aalo dabeecad anshax leh, maadaama ay leedahay khataro kala duwan oo meeraha ku yaal.
Saamaynta kaladuwan ee isbeddelka cimilada waxay sababi kartaa baabi'inta saddex meelood meel noocyada dulinku marka la gaaro sannadka 2070.
Korodhka heer kulka ee la xidhiidha kulaylka adduunka ayaa sababaya in Badweynta Caspian ay lumiso biyo aad u tiro badan.
Waxaan dhammaantiin kuu sheegeynaa fulkaanaha: sida ay u samaysan yihiin, noocyada fulkaanaha ee jira, iyo qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin. Maadaama ay jiraan? Soo ogow!
Dhammaan wixii ku saabsan lakabka ozone Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay u shaqeeyaan lakabka ozone iyo sida ay muhiim ugu tahay aadanaha?
Mangroves-ku waa nooc ka mid ah caqabadaha ka ilaaliya Vietnamese-ka waxyeellooyinka sida nabaad-guurka iyo heerarka badda ee sii kordhaya.
Kordhinta ilaa 6 digrii Celsius xagaaga, isticmaalka qaboojiyaha ayaa cirka isku sii shareeraya 6%, taas oo ka sii dareysa kuleylka adduunka.
Isbedelka Cimilada wuxuu beddelaa imaatinka Spain ee ”shimbiro naadir ah”
Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa sababta isbeddelka cimilada uu u beddelayo imaatinka waxa loo tixgeliyo "shimbiraha dhifka ah" waddanka Isbaanishka.
Saldhigyada saadaasha hawada ee daraasadda isbeddelka cimilada ee Buurta Teide
Beerta Qaranka ee Teide waxaa ku yaal saldhigyo saadaasha hawada oo mas'uul ka ah la socodka saameynta la xiriirta isbeddelka cimilada.
Roobabkii ka da'ay bishii May ee la soo dhaafay roobabkii ka da'ay saxaraha ugu qalalan uguna qoraxda badan adduunka, lama degaanka Atacama, kumanaan dhir ah ayaa soo ifbaxay.
Afrika orichteropes waxay la ildaran tahay isbedelka cimilada
Abaarta ku habsatay lamadegaanka Kalahari ayaa yareynaysa tirada dadka ku nool qaaradda Afrika, kuwaas oo u dhinta kuleylka badan.
Waxaan luminay xakameyntii isbedelka cimilada
Maaddaama celceliska heerkulka adduunku sii kordhayo, bani aadamku weli ma qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu joojinayo isbeddelka cimilada, oo ay xakameyntiisa lumiyeen
Isbedelka cimilada wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dalxiiska iyo nidaamka deegaanka
Saamaynta isbeddelka cimilada sida kor u kaca heerarka badda, heerkulka biyaha ee sareeya, waxay saameyn ku yeelan doontaa dalxiiska iyo nidaamka deegaanka.
Waxaan kuu sheegi doonnaa qaar ka mid ah saameynta ugu weyn iyo tan ba'an ee kululaynta adduunku yeelan doonto muddada dhexe iyo tan fog.
Sida xayawaanku isugu rogi karo dhagax. Haraaga
Sharaxaadda waxa ay fosil tahay iyo geeddi-socodka kala duwan ee u dhici kara in noolaha ay ku noqdaan ku-fiiqid dhagax ama waxyaabo kale
Julaay 2017, diiwaanka celceliska heerkulka cusub ee adduunka
Diiwaanada cabbiraadaha kala duwan ee adduunka ee ay qaaday NASA waxay muujinayaan diiwaan celcelis heer caalami ah oo cusub celcelis ahaan bisha Julaay.
Miyuu dhalaaliyaa Larsen C sababaa degganaansho la'aan?
Jeexitaanka xannibidda Larsen C ee Antarctica ayaa saynisyahannada fursad u siisay inay wax badan ka bartaan xasilloonida shelf.
Kaymaha cirfiidka, muuqaalka cusub ee meeraha
Maaddaama heerka badda kor u kaco, biyuhu waxay sii gaarayaan xeebaha abuurista kaymaha cirfiid, aagagga cusub ee Dhulka.
Isbedelka Cimillada wuxuu dili doonaa 152 reer Yurub ah dhammaadka qarniga
Dhamaadka qarniga, isbeddelka cimilada wuxuu dili doonaa qaar ka mid ah 152 milyan oo reer Yurub ah haddii aan la dhimin qiiqa gaaska wasakhaysan.
Isbadalka cimilada ayaa durba badalay qulqulka webiyada iyo daadadka Yurub
Kordhinta kuleylka waxay la socotaa qulqulka webiyada iyo daadadka sii kordhaya, iyagoo dhaqaajinaya taariikhaha markii ay dhici jireen.
Sidee ayaanad u seegin roobka xiddigaha oo aad u aragtaa iyaga dhammaantood!
Xagee laga raadsadaa? Waa kuwee meelaha ugu fiican ee lagu arki karo? oo xaggee bay ka yimaadaan, waayo? Waxaan kuu sharxeynaa wax walba oo ku saabsan habeenkan sixirka ah!
Warbixin ayaa xaqiijineysa in sanadka 2016 uu ahaa kii ugu kululaa
Sannadkii 2016 wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu kululaa. Duufaanada kuleylaha, kor u kaca heerarka badda ... wax walbo way sii xumaanayaan. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Mawjadaha badda waxaa soo saara ficil isku mid ah oo dabayl, hirar iyo cufnaanta biyaha ah. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato?
Smart Green Tower, oo ah daar weyn oo lagu xakameeyo isbedelka cimilada
Dhismooyinka mustaqbalka waxay noqon doonaan kuwo hufan, nadiif ah oo isku filan, sida Smart Green Tower, oo ah daar weyn oo dhowaan la dhisi karo.
Saamaynta isbeddelka cimilada ee mustaqbalka
Musiibooyinka cimilada ee ay sababto kululaynta adduunka waxay sababi karaan 152.000 oo dhimasho sanadkii Yurub oo dhan inta udhaxeysa sanadaha 2071 iyo 2100.
Dhulku waa casaan kulul
Sanadihii ugu dambeeyay heerkulka celceliska adduunka ayaa kaliya kordhay, taasoo dardar gelisay dhalaalka iyo kor u kaca heerka badda.
89% Isbaanishku waxay leeyihiin isbeddelka cimilada dhibaatada ugu horreysa
Muwaadiniinta Isbaanishka waa kuwa ahmiyada ugu badan siiya isbedelka cimilada oo ku qiimeeya inay yihiin halista ugu weyn ee soo food saareysa dalka.
Spain waxay halis ugu jirtaa inay noqoto lamadegaan dhamaadka qarniga
Dowladda Spain waxay bilaabeysaa qorshe looga hortagayo saameynta ka dhalan karta xaalufka qaran ee lama degaanka ah ee la filayo inuu sii kordho iyada oo aan la joojin.
Qorshe la qabsi ee isbeddelka cimilada ayaa laga bilaabay Isbaanish
Agaasinka Guud ee Joogtaynta Xeebta iyo Badda ayaa bilaabay Istaraatiijiyadda Laqabsashada Xeebaha Isbayn ee Isbedelka Cimilada
Hindiya gudaheeda, beeraleyda ayaa isdilaya sababo la xiriira kuleylka adduunka
Beeraleyda Hindiya waxay isku dilaan roob la'aan, in kastoo tii ugu xumeyd ay weli imaan: marka la gaaro 2050 heerkulka ayaa sare u kici kara 3ºC.
Celceliska heerkulka adduunka ayaa ka kici doona wax ka badan 2 ° C dhammaadka qarniga
Joojinta kuleylka adduunka waa caqabadda ugu weyn ee heysata noocyada aadanaha ee qarniga 2-aad. Heerkulka adduunka ayaa ka kici doona wax ka badan XNUMX ° C
12 sano gudahood waan ogaan doonaa hadii aan awood u yeelanay la dagaalanka isbedelka cimilada
Isbedelka cimiladu wuxuu halis ku yahay nolosha malaayiin qof. Si aan u ogaanno inay awood u yeelatay inay dagaalanto, waa inaan sugnaa 12 sano.
Xilalka uu qofka bini-aadamka ahi aaminsan yahay in ficilka la qaybiyo iyo asalka isbeddelka cimilada ayaa u muuqda mid aan si fiican loo qeexin
Hoosudhaca roobka ka da'aya Amazon wuxuu keenaa saamayn wareeg ah. Maxaa sababa isbedelka cimilada ee Amazon?
»Haddii aad ka yar tahay 32 sano, weligaa kuma noolaan bil adoo heer kul kulkeedu ka hooseeyo celceliska»
Haddii aad ka yar tahay 32 sano, marka laga reebo inaad tahay kun sano, weligaa kuma noolaan bil iyada oo heer kulku ka hooseeyo celceliska. Waxaan kuu sheegeynaa sababta.
Dhalashada Permafrost ayaa sii socota. Hadda tirada badan ee gaaska methane-ka ee la sii deyn karo oo sii xumeynaysa kuleylka adduunka waa mid laga naxo.
Hindiya oo ah dalka seddexaad ee ugu wasakheynta badan adduunka, ayaa bilaabay inay guryo cagaaran ku dhisto waxyaabo dib loo warshadeeyay si loo yareeyo qiiqa wasakhdu ku jirto.
Sanadihii ugu dambeeyay, kororka kirada gawaarida ayaa dhibaatooyin badan ka dhaliyay jasiiradaha Balearic, oo ay ugu daran tahay wasakheynta hawada.
Maalgelinta dhiraynta Afrika, waa tallaabo wax ku ool ah oo lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada
Tijaabo ka dhacday Uganda ayaa muujisay in, haddii aad hesho dhiirigelin yar, aad ku badbaadin karto deegaanka adoo caawinaya beeraleyda.
Barafleyda Peru waxay u dhimanayaan heer aan horay loo arag
Peru waxay lumineysaa barafkeeda isbadalka cimilada. Sababta tan ayaa ah inay lumisay 55 sano oo kaliya, 61% dhammaan barafkeeda.
Barafleyda Shiinaha ayaa halis gelinaya kuleylka adduunka
Heerkulka adduunka oo sare u sii kacaya ayaa halis gelinaya barafka Shiinaha. Haddii aan waxba laga qaban, waxay baaba'aan muddo 50 sano ah.
Kala dhalaalida badweynta Antarctic waxay kordhin kartaa samaysanka daruurta
Daraasad ay sameeyeen saynisyahano ka socda machadka sayniska badda ee CSIC ayaa baaray cawaaqibka dhalaalka dhalashada samaynta daruuraha.
Isbeddelka dabaysha ayaa dhalinaya hirarka Kelvin, oo aakhirka dardar gelinaya dhalaalida barafka gacanka Antarctic Peninsula.
Kulankii Trump iyo Macron kadib, waxaa isbadal wanaagsan ku yimid mowqifka madaxweynaha Mareykanka ee siyaasada cimilada
Waa maxay heerkulka ugu sarreeya ee aadamuhu u adkeysan karo?
Waxaan kuu sheegeynaa waa maxay heerkulka ugu badan ee bini aadamku adkeysan karo. Waa hubaal inaad kaa yaabisay. ;) Gali oo soo hel.
CAMPI FLEGREI: Supervolcano-ka ugu weyn Yurub, waa soo toosayaa
Supervolcano Talyaani ah Campi de Flegrei, ma joojinayo kordhinta cadaadiskiisa, wuxuuna ku dhow yahay meel muhiim ah. Khubarada iyo maamulka ayaa heegan ku jira.
Isbedelka Cimilada ayaa sare u qaaday heerkulka Badda Tasman ugu yaraan saddex darajo
Xilliga xagaaga koonfurta heerkulka badda Tasman wuxuu ka kacay ku dhowaad saddex darajo oo ka sarreeya celceliska. Sababta? Isbedelka Cimilada.
Trump wuu badali karaa maskaxdiisa isbedelka cimilada
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa badali kara fikirkiisa isbedelka cimilada kadib markii uu ka baxay heshiiskii Paris.
Bishii Juun waxay u ahayd Jasiiradda Iberian Peninsula, oo ah diiradda caalamiga ah ee heerkulka sare
Diiwaanka heerkulka ee aan istaagin kor u kaca ilaa 2015. Juun ayaa nooga tagaya rikoor kale oo cusub oo ah celceliska heerkulka, iyo diiwaanno badan oo adduunka ah.
400.000 ka hor, kuleylka adduunka ayaa tirtiray go'aanka barafka ee Greenland
Cilmi baaris ayaa shaaca ka qaaday in qiyaastii 400.000 oo sano ka hor uu jiray kuleylka adduunka oo sababay in barafkii Greenland la waayo.
Heerkulka sii kordhaya ayaa xaddidi doona howlaha shirkadaha diyaaradaha
Markay heer kulka kaco, duulimaadyo badan ayaa dhibaato badan kala kulmi doona inay diyaaradahooda dhulka ka saaraan. Gali oo soo hel sababta.
Waxaan iftiimineynaa laba magaalo sida Los Angeles iyo London, oo halistooda daadad ay ugu wacan tahay kor u kaca heerarka badda oo aad u sareysa.
Daruuraha Oort. Xadka Nidaamka Cadceedda
Sharaxaadda waxa uu yahay Oort Cloud Cloud, meesha meteorites "ku nool yihiin", iyo sababta ay ugu ciyaartay door ka sarreeya adduunkeenna.
Sida lagu sheegay daraasad cusub, si loola dagaallamo isbeddelka cimilada waa inaan yeelanno carruur aad u yar oo aan noqonno kuwa khudradda cuna, iyo waxyaabo kale oo aan halkan kuugu sheegayno.
Antarctica waxay aad ugu nugushahay isbedelka cimilada. Caddaynta ugu dambaysa ee tani waa go'doominta Larsen C, oo ah shelf weyn oo baraf ah.
Mawjad kuleyl cusub ah ayaa heegan gelisay 27 gobol
Mawjad kuleylka labaad ayaa heegan ku ah 27 gobol oo ku yaal Spain, laba ka mid ah waxay heegan casaan u yihiin heerkulka ilaa 45 digrii.
Macron: "Si loola dagaallamo argagixisada waa inaan xallinnaa isbedelka cimilada"
Warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan xiriirka dhow ee ka dhexeeya qaxootiga, argagixisada iyo isbedelka cimilada. Macron ayaa tan tixgeliyay wuxuuna raadinayaa xalal.
Sidee ugu yar qoraxda u saameyn doontaa Dunida?
2019-2020 Qorraxdu waxay gaari doontaa qoraxda ugu yar, taas oo saameyn ku yeelan doonta meeraha Dunida. Laakiin sidee ayay runtii u saameyn doontaa?
Dhirta ayaa 30% saameyn ku leh roobka
Dhirta ayaa la ogaaday inay saameyn weyn ku leedahay cimilada waxayna masuul ka tahay 30% kala duwanaanshaha roobka.
Ma nolol baa ku jirta daruuraha? Haa! Xitaa haddii ay u muuqato inay maya tahay
Tijaabo ay hay'adda US Scripps Oceanographic Institution ku sameysay canaasiirta ka kooban daruuraha, halkaasoo ay ka heleen walxo dabiici ah iyo bakteeriyo.
Isbedelka cimilada waxaa lagu qasbi doonaa inaan u haajirno
Maaddaama dhacdooyinka cimilada ay sii xoogeysanayaan isbeddelka cimiladuna uu ka sii darayo, dad badan ayaa lagu qasbi doonaa inay ka baxaan guryahooda.
54 darajo Celsius ayaa laga diiwaan galiyay Iiraan
Waxaan ka hadleynaa koonfur-galbeed ee Iran, oo heerkulka ugu sarreeya ee gaaraya 54 darajo Celsius lagu gaarey magaalada Ahvaz.
Kulaylka adduunku wuxuu door bidaa kaneecada
Miyaad dareentay inay jiraan kaneeco soo badanaya? Diirimaadka adduunka dartiis ayay dadkeedu u kordhayaan. Laakiin, nasiib wanaag, tallaabo horay ayaa loo qaaday.